Tottenham ayaa lagu xukumay lacag ganaax ah oo dhan £23,000 Gini iyo 3,000 Euro oo kale |
HomeCiyaarahaTottenham ayaa lagu xukumay lacag ganaax ah oo dhan £23,000 Gini iyo 3,000 Euro oo kale
Tottenham ayaa lagu xukumay lacag ganaax ah oo dhan £23,000 Gini iyo 3,000 Euro oo kale
November 14, 2020 Admin Ciyaaraha, Wararka 0
Tababaraha kooxda kubadda cagta Tottenham ee Jose Mourinho ayaa Bannaanka ka joogi doona hal kulan oo tartamada Yurub ah, sida ay UEFA shaacisay.
Mourinho ayaa lagu ciqaabay habsaan ay kooxdiisu samaysay kulankii Europa League ee Royal Antwerp ay wada ciyaareen October 29.
War-saxaafadeed guddida anshaxa UEFA soo saartay ayaa waxa kale oo lagu sheegay in Tottenham lagu xukumay lacag ganaax ah oo dhan £23,000 Gini oo garoonka ay ka habsaameen ah iyo 3,000 Euro oo kale oo ah inay jabiyeen shuruucda hab-dhaqanka wanaagsan.
UEFA waxa kale oo ay xustay in si shaqsi ah tababare Jose Mourinho loogu wargeliyey ganaaxa halka kulan uu bannaanka kaga joogayo garoomada, balse Tottenham loo diray qoraalka ganaaxa lacageed lagu riday ee ay tahay inay ku shubto xisaabaadka UEFA.
Kooxda reer Scotland ee Celtic ayaa iyadana lagu ganaaxay hab-dhaqan aan fiicnayn oo ay samaysay kulankii Europa League ee Lille, waxaanay bixin doontaa 7,000 Euro.
Jose Mourinho ayaa hore cabasho uga muujiyey goolka kulankan lagu ganaaxay oo uu tibaaxay inuu aad uga yar yahay intii caadiga ahayd.
Muran ka dhashay ayaa keenay in la beddelo biraha garoonka ku yaallay oo cabbirkii saxda ahaa laga dhigo, taas oo ay UEFA qiratay inay ahayd wax jira.
Tottenham iyo Mourinho ayaan wax war ah kasoo saarin ganaaxyadan lagu riday, balse waxa la sugayaa inay ka hadlaan.
Si kastaba, Jose Mourinho iyo ganaaxyada ayaan kala fogaanin, waxaana tababaraha reer Portugal uu ciqaab lacageed iyo kulamo bannaanka la dhigo xili ciyaareed kasta ku mutaystaa hadallo iyo ficillo uu sameeyo.